musha nyika dzakabatana Singers Charlie Puth Mwana Wechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Singer ane zita rekuti "Chunky Spunky". Yedu yeCharlie Puth Yehudiki Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevaimbi vane tarenda munyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezve Charlie Puth's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Charlie Puth Upenyu hwepakutanga uye Yepamberi Yemhuri:
Charles Otto Puth Jr akaberekwa pazuva re2nd raDecember 1991 kunharaunda yeRumson muNew Jersey, United States. Ndiye wekutanga pavana vatatu akazvarwa kuna amai vake, Debra Puth uye kuna baba vake, Charles Puth. Muimbi anozivikanwa ndeweAmerica nyika yeGerman neHungary midzi yemhuri. Kuwedzerwa kumhuri yekwaCharlie ndiko kwaAshkenazi maJuda midzi iyo inoperera kumuita iye munhu wedzinza rakasanganiswa.
Iwe unoziva here kuti Charlie Puth aingova nemakore maviri chete ekuberekwa paakarumwa nembwa paziso rake rerudyi? Kwete yekutenda kune iyo inouraya-imbwa yekuruma chiitiko, tsiye yemuimbi inogara zvachose mune yakasarudzika nzira. Kunyangwe zvakadaro, Charlie haana kumutswa kuti angwarire imbwa kwaakaberekerwa muRumson kwaakakurira pamwe nehama dzake mapatya Stephen naMikaela.
Anotokura aine nzeve yakanaka uye ndangariro dzinochengeta dzemheremhere inonzwika ichibva kune chero magetsi. Amai vaCharlie vakawana kugona kwake kusingawanzo uye vakatanga kumudzidzisa kuridza piyano paakanga akura. Saka ndipo pakatanga hupenyu hwepakutanga hwaCharlie mumimhanzi yechinyakare, chiitiko chaakazvipira nekuchibatsira uye akaunza kune vanin'ina vake.
Charlie Puth Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva Charlie paakanga akura gumi, akatanga kuwana dzidzo pachidzidzo chemimhanzi chinonzi Jazz. Izvo hazvina kumbotora nguva refu asati apinda muchirimo chevechidiki jazi ensemble yakarongedzwa neCount Basie Theatre chikoro. Ndichiri kumusangano uyu, ane makore gumi nemaviri Charlie akaita fungidziro yakanaka iyo yakaita kuti theatre imubhadhare kuti atambe muCharlie Brown kugadzirwa.
Izvo hazvitauri kutaura kuti Music yaive Charlie akanakisa chidzidzo uye chiitiko kubva kune ake epuraimari & epakati mazuva echikoro pa Holy Cross Chikoro kuenda Forrestdale Middle School muRumson. Muchokwadi, Charlie akaita yake yekutanga yakakosha kuwana kubva kumimhanzi seyechitanhatu-giredhi repuraimari mudzidzi paakanyora nekugadzira kisimusi kodhi yakanzi "Ivai Merry Charlie Kisimusi" uye akaitengesa pasuo nesuo, achiita $ 6 mukutengesa.
Pamwe chete neakajairwa makore epamusoro paRumson-Fair Haven Regional High Chikoro, Charlie aive piyano yejazi rakakura uye zvidzidzo zvechinyakare paManhattan Chikoro cheMimhanzi Pre-College. Mumhanzi wekuridza wakaenderera mberi nekufunda kugadzirwa kwemimhanzi. Akadzidzawo engineering kuBerklee College of Music uko akapedza kudzidza mu2013.
VERENGA Kenny Rogers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Charlie Puth Yekutanga Basa Rehupenyu:
Rwendo rwebasa rakabudirira mumimhanzi rinotanga nhanho yakashinga kwazvo. Kuna Charlie, danho raive kutanga Youtube Chiteshi chinonzi 'Charlies Vlogs' munaGunyana 2009. Charlie akashandisa chiteshi kutumira mavhidhiyo emamhanzi ane mabutiro pamwe nekukodha vhidhiyo yemumhanzi yerwiyo rwake rwekutanga, "Ndidzo My Sexy Shades" mune gore 2010.
Mushure mezvo, Charlie akaburitsa mutambo wake wekutanga wakawedzerwa, "The Otto Tunes" ndokupinda mumakwikwi aPerez Hilton akatsigirwa pamakwikwi evhidhiyo pamhepo iwo Unogona Kuimba? Makwikwi akaona Charlie achibatana naEmily Luther mukumisikidza mutambo wakanaka weAdele's "Mumwe Munhu Akafanana Nawe" izvo zvakabata zvido zvevakawanda kusanganisira wepaTV Ellen DeGeneres.
Charlie Puth Road To Fame Nyaya:
Ellen DeGeneres akakurumidza kusaina Charlie naEmily Luther kwaari ElevenEleven rekodhi rekodhi pamwe nekuita kuti vaviri vacho vaite Adele's "Mumwe Munhu Akafanana newe" pachiratidziro chake. Kubudirira uku kwakava shanduko huru muhupenyu hwaCharlie apo iye aiona yakawedzera fan fan iyo iye - mukubvuma kwake - "kufunga kuti kwaisambogoneka".
Nekudaro, Charlie haana kumbobvira anyatsokwikwidzana nekuti aive achiri kuzove nemukana wekuzviratidza semunyori wenziyo. Kuwedzerwa kune zvishuwo zvekunyora rwiyo rwaCharlie nzara yekuita ega solo basa. Kufanana nemhinduro yaMwari kuzvishuwo zvemoyo, Atlantic Records yakafungidzira zvaidiwa naCharlie uye akauya achimupa chibvumirano kuti azviite.
Charlie Puth Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Akasaina kumarekodhi eAtlantic, Charlie akaburitsa rake rekutanga asina kuroorwa, "Marvin Gaye" aine Meghan Trainor mu2015 kuti vabudirire. Pasina nguva refu, akawana mukana wegoridhe wekuzviratidza semunyori wenziyo paakarairwa naye kuti auye nenziyo yeFurious 7 movie iyo yaizopa mutero kuna Paul Walker.
Kunyangwe Charlie aive mumwe wevanopfuura makumi mashanu vanyori venziyo vakakumbirwa kuimba rwiyo, rake basa "See you Again" rakasarudzwa neiyo franchise iyo yaivewo naWiz Khalifa kudonhedza ndima dzakatenderedza manzwi uku kurova kuchiwedzerwa kuimba yepiyano. "See You Again" yakawedzera machati mune isingasviki nyika makumi mapfumbamwe, ichiwana nhamba dze50 paBillboard Hot 90, iTunes, Shazam uye Spotify. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Charlie Puth Hukama Hupenyu Hupenyu Chokwadi:
Kure nekurapa mafeni ake nenziyo huru dzepop, Charlie anowana nguva yekuteedzerana zvido zverudo sezviri pachena muhukama hwake hwakasimba pamusoro pemakore. Muimbi ane hunhu hunonakidza uye izwi rinonyaradza ane vasikana vakawanda muhupenyu hwake hwerudo uye hatigone kuvapa mhosva yekuve maari.
Kunyangwe Charlie akakurumidza kupfura hukama hwenhema hwehukama sehukama hwaMeghan Trainor naHailee Steinfeld, kuchine zvirevo zvekunyepedzera nezve nyaya dzake nevamwe. KuCB, tinovavarira kuseta zvinyorwa zvenguva yaCharlie yekufambidzana yakatwasuka nekunyora hukama hwake hwakasimbiswa hunosanganisira kudanana kwake na'Iwe Unonditorera Nyenyedzi 'Bella Thorne, yake yehupenyu hwepfupi selena Gomez pamwe nenyaya yake neiye 'Ivo vekutanga' mutambi Danielle Campbell.
Mu2018 Charlie aive nerudo stint neiyo 'Yekupedzisira Zhizha' nyeredzi Halston Sage. Chavo kwaive kudanana uko kwakazadza cyberpace nemifananidzo yavo pamwe chete vasati vaenda munzira dzakasiyana. Charlie akazotevera kubatanidzwa nemuimbi uye munyori wenziyo Charlotte Lawrence waakadanana naye kwechikamu chikuru che2019.Ari panguva yekunyora asina kuroorwa asina mwanakomana (kana) mwanasikana kana (s) akaberekwa kunze kwewanano. Zvinogona kutora nguva refu Charlie asati asangana nemukadzi wake uye oita mukadzi kubva maari.
Charlie Puth Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Ichokwadi isingatauriki kuti nyeredzi dzemimhanzi dzakakomborerwa nemhuri inoshamisa. Mhosva iyi haina kumbosiyana kuna Charlie ane hupenyu hwemhuri hunotapira. Tinokuunzira chokwadi pamusoro penhengo dzemhuri yekwaCharlie pamwe nerekodhi inowanikwa yedzinza rake.
Nezve baba vaCharlie Puth:
Charles Puth ndibaba vaCharlie. Iye akazvarwa pa13th yaNovember 1957 uye akashanda semuvaki asati ave real estate mumiriri. Iye muimbi uyo ari pasina mubvunzo ari padyo nevabereki vake anokudza baba vake nekumisikidza tsika dzakakwirira dzaakararama kusvika kubva paudiki hwake kusvika zvino. Ivo baba vevatatu - vanonzi 'Chuck' mudenderedzwa remhuri - inozivikanwa zvakare kuti inogara iri papeji rimwe chete nemukadzi wayo nevana vatatu vakura.
Nezve amai vaCharlie Puth:
Debra, anonzi 'Deb' mumhuri denderedzwa amai vaCharlie. Iye akazvarwa pazuva re14th raGunyana 1959 uye akashanda semunyori wemuimbi weHBO wezvekutengesa. Aive Debra uyo akadzidzisa Charlie kuridza piyano uye ndokuenderera mberi nekumufumura kune yakafara nyika yemimhanzi. Haasi amai chete kune vatatu asi chipangamazano kuvadzidzi vakati wandei waakadzidzisawo mimhanzi mumakore apfuura. Anokurudzira chirevo chekuburitsa vana kunzvimbo dzakasiyana dzezviitiko zvevanhu kuti vaone kuti zvido zvavo zviripi uye nekubatsira kusimudzira.
Nezve hama dzaCharlie Puth:
Charlie achingova nevanin'ina vake vaviri vanoitika kuva mapatya. Vanosanganisira munun'una wake Stephen uye hanzvadzi yaMikaela. Stefano anoshanda serevhi uye anogadzira runyora apo Mikaela ari maneja wetarenda. Ivo vaviri vanogara murunyararo uye vachiwirirana nemukurumbira wavo mukoma pane imba yake yeBeverly Hills. Chokwadi, rudo rukuru sei rwavanarwo kune mumwe nemumwe uye kusagadzikana kwakadii kusungwa kunovabatanidza seimwe.
Kuenderera mberi kuhama dzaCharlie kana kuwedzera mhuri kumashure. Sekuru vababa vake vaive Edward Carl Puth naLucille C./T. uku baba vake nasekuru naambuya vaive Harry kana Herbert Goldstein naPhyllis A zvakateerana. Zvishoma zvinozivikanwa nezve babamunini babamunini, vatete uye vanin'ina. Iye haana muzukuru kana vazukuru panguva yekunyora iyi biography.
Charlie Puth Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Charlie Puth ane hunhu hwakasarudzika ane makati eSaggitarius Zodiac chiratidzo maitiro. Akasarudzika, senge, akasununguka, anosetsa, ane rupo, anogamuchira, anofarira uye anoyevedza.
Kuwedzerwa kuCharlie's persona inokatyamadza ndiko kusununguka kwake kwekuburitsa ruzivo nezve ake ehupenyu hwega uye hwepamoyo. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kufamba, kuita zvehusiku-kutengesa pamhepo, kuona mafirimu uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Charlie Puth Lifestyle Chokwadi:
Achienderera mberi nekuita kwaCharlie Puth uye kushandisa mari yake pamwe nemashandisiro ake, muimbi ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora gumi emamiriyoni panguva yekunyora. Chinhu chikuru chinopa hupfumi hwemuimbi irimo mumimhanzi yake uye basa rekuimba nepo vamwe vane masosi avo akasimbiswa mukuonekwa kwake kweTV, zvibodzwa uye mubairo weYouTube.
Nekudaro, Charlie - uyo asingazivikanwe kuve anowana mihoro uye mibairo - anowana uye anochengetedza yakasarudzika mamirioni mapfumbamwe emadhora kuBeverly Hills muCalifornia. Imba inogara pane huru nzvimbo ine makamuri edeluxe, padziva rekushambira rekunze, studio yekurekodha pakati pezvimwe zvinhu.
Asides anoshandisa kushandisa kuchengetedza imba, Charlie ndiye anodada uye ari muridzi muridzi weakawanda anodakadza kutasva mabhiza. Kuunganidzwa kwake kunoshamisa kwemotokari dzinozvirumbidza pamusoro pevatasvi vakaita seHonda Civic, Jeep Cherokee, Dodge Charger SRT Hellcat uye zvimwe zvakawanda.
Charlie Puth Untold Chokwadi:
Kuputira, tinopa zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi chakasanganisika mune yake bio.
Unoziva here kuti Charlie Puth akaberekerwa kuna baba veKaturike uye amai vechiJudha. Nekuda kwekuva padyo zvakanyanya naamai vake, Charlie akasarudza chiJuda sechinamato chake. Anowanzo kugovera mapikicha anomubata aine mabhedhuru echiJuda.
Funga nezvevanhu vashoma vekuAmerica vasina mukurumbira wemuviri, funga nezvevaimbi vasingadi ma tattoos, funga nezvaCharlie Puth nemuviri wake usine banga. Muimbi uyo ane urefu hwe5 ′ 11 ″ anoda kutaridzika sezvisikwa uye haashongedze kuvezwa kwakanaka.
Charlie akamboputa fodya yechinangwa chinodhaka inonzi mbanje asi akafuratira tsika iyi mushure mekunge apotsa kubva pakuputa fodya. Ukuwo, anopiwa kunwa doro zvine mwero.
Izita remuimbi rekuti 'Chunky Spunky Monkey Poofington' rakapihwa kwaari kusekondari. Kunyangwe Charlie asina kutsanangura zvazvinoreva. Anobvuma kuti iri izita remadunhurirwa rakanakisa raakambopihwa.
Thanks for reading vedu Charlie Puth Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!